Dhulbeereedkii oo Qardobay, Abaaro iyo Waliba Xuduudii Gabalka Ogaden oo Xidhan – Rasaasa News
Apr 23, 2011 Abaaro iyo Waliba Xuduudii Gabalka Ogaden oo Xidhan, Dagaaladii gabalka Somalida Ogaden ka socday 17 sano, Dhulbeereedkii oo Qardobay, waxay saamayn wayn ku yeesheen wax soo saarkii beeraha iyo waliba dhaqashada xoolaha nool. Tabcashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha ayey ku xidhan tahay nolosha dadweynaha dhulka Somalida Ogaden.
Dagaaladii gabalka Somalida Ogaden ka socday 17 sano, waxay saamayn wayn ku yeesheen wax soo saarkii beeraha iyo waliba dhaqashada xoolaha nool. Tabcashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha ayey ku xidhan tahay nolosha dadweynaha dhulka Somalida Ogaden.
Tabcatadii deganaa gabalku waxay joojiyeen tacibii beeraha, ka dib kolkii ay dhibaato kala kulmeen ciidamada dawlada iyo jabhadihii dagaalka kula jiray.
Ciidamada dawladu waxay beeraleyda ku eedayn jireen in ay raashin iyo gabaad siiyaan Jabhadaha. Arintaas darteed waxay u gaysan jireen tabcatada dhibaatooyin ay ka mid yihiin xadhig, dil iyo midhaha ay tabcaan oo xoog ay ciidamadu kagga qaataan.
Jabhaduhuna waxay dhinacooda ku eedayn jireen beeraleyda in ay la shaqeeyaan dawlada warbixinta jabhadana ay u gudbiyaan ciidamada dawlada. Waxayn u gaysan jireen ciqaab sida figayn, dil, canshuur aan meela haysan iyo in raashinka ay beertaan oo laga qaato.
Beeralayda gabalku kolkii ay u adkaysan waayeen dhibaatooyinka ay u gaysanayeen labada dhinaca ee ay colaadu u dhaxaysay, ayey ka huleeleen dhulkii ay beeran jireen. Waxayna noqdeen kuwa soo gala magaalooyinka oo ku dhibaataysan iyo kuwa u qaxa dalalka dariska ah.
Waxa soo saarkii midhaha beeraha ee gabalku wuxuu galay dhulka, waxaana gabaabsi noqday cuntadii. Nolosha dadweynaha gabalku waxay si khasab ah ugu xidhantay raashinka ka imanaya dalka dariska ah ee Somaliya.
In kasta oo ay nabad saxiixeen labadii dhinac ee ay colaadu u dhaxaysay, tabcadtada gabalka way ku adag tahay in ay dib ugu laabtaan tabicii beeraha, waxayna wali ka cabsanayaan dhibaatooyinkii hor ugu dhacay.
Dawlada degaanka Somalidu waxay qaaday talaabooyin dhibaataynaya nolosha dadweynaha, waxayna xidhay xadka uu gabalku la wadaago dalka Somaliya, waxayna soo rogtay canshuur aan hore gabalka uga jirin.
Waxaana hal mar istaagay ganacsigii iyo gaadiidkii raashinka keeni jiray gabalka. Waxaana gabalka ka jira abaaro xoog leh oo dad iyo duunyo ah iyo biyo la,aan baahsan.
Heshiiska ka dib, waxay ahayd in ay dawladu hubiso dib u bilaabida wax soo saarka beeraha ee gabalka Somalida ee Ogaden.
Waxayna ahayd in ay dawladu tixgaliso, hoos u dhaca ku yimid midhaha beeraha ee gabalka ee ay keeneen colaadii jirtay 17 sano iyo waliba abaarta baahsan ee gabalka ka jirta.
Qurba joogta degaanku heshiiskii nabada ka dib, waxay isha ku hayaan talaabooyinka horumarinta ee ay dawlada Itobiya ka samayso degaanka Somalida Itobiya.
Jees Jees Ugaas Loo Dilyeey Yaa Jid Bixindoona